महानायक राजेश हो भनेर आनन्दले सुत्नु राम्रो : दीपकराज गिरी - Sidha News
काठमाडौं। ‘महानायक’ राजेश हमाल हो । उहाँलाई नै ‘महानायक’ भन्नुपर्छ । उहाँ होइन भन्नेतिर जाँदै नजाऔँ । अहिले महानायक राजेश हमाल हो भनेर आनन्दले सत्नु राम्रो हो । म अहिले यो बिषयमा चुप लागेर बसेको छु । तै पनि विवादमा तान्ने काम भएको छ।
यो विषयमा कुनैकुरा पब्लिकले सुन्न चाहँदैनन् । त्यो भन्नुको अर्थ छैन । जुन कुरोमा पब्लिक खुसी हुन्छन्, त्यही भन्दा राम्रो । महानायक राजेश हमाल हो, आजको मितिमा, हिजोका मितिमा र भोलिको मितिमा पनि । ब्यक्ति, राज्य वा पब्लिकले, यो उपाधि कसले दिएको हो, थाहा छैन।
महानायकको काम, कर्तब्य र जिम्मेवारी के हो ? त्यो कसले छुट्याउने हो ? त्यो हुनु प¥यो । त्यसको जिम्मेवारी उसैले लिनु प¥यो । अहिले राजेश महानायक हैन भन्नेतिर जाँदै नजाऔँ । पब्लिक जे सुन्न चाहन्छ, हामीले अहिले त्यही भन्नुपर्छ।
यो कार्यकारी पद पनि होइन । आलङ्कारिक पद हो । जसले जसलाई दियो, त्यही महानायक हुन्छ । यसको केही मापदण्ड भए पो यो हो वा यो होइन भन्ने । कुनै ब्यक्तिले अर्काे ब्यक्तिलाई महानायक भनिदिए ऊ पनि महानायक हुनसक्छ । सबैको यो बुझाइ छ । महानायकको काम के ? भनेर केही साथीहरुले प्रश्न उठाएका होलान् । तर महानायक राजेश हमाल नै हो भनौँ।
महानायक भन्ने कुरामा पहिलादेखि नै विवाद छ शान्ति प्रिय (वरिष्ठ रंगपत्रकार)
चलचित्र अभिनयमा लागेर आफ्नो नायकत्व देखाउँदै, सफलता पछ्याउँदै, व्यावसायिक चलचित्र उद्योगलाई लामो समय योगदान गरेको ब्यक्तिलाई ‘महानायक’ त भन्न सकिन्छ । राजेश हमाल महानायक हो भन्ने विषयमा भने धेरै विवादहरु भए । राजेश धेरै व्यावसायिक चलचित्र खेलेका ब्यक्ति अवश्य हुन् । उनी कुनै बेला फिल्मको सानोतिनो भूमिकादेखि मेजर भूमिकासम्ममा देखिन्थे । उनी महानायक हुन् कि होइनन् ? कसरी महानायक ? भन्ने कुरोमा पहिलेदेखि अहिलेसम्म विवाद नै छ । त्यसैले हामीले हो÷ होइन भन्नेभन्दा पनि पब्लिकले कसरी लिन्छ भन्नेमा ध्यान दिनु जरुरी छ।
राजेशका व्यावसायिक चलचित्र छन् । तर, राम्रा छैनन् । त्यो राजेशको कमजोर पाटो हो । उनका सम्झनायोग्य केही चलचित्र छैनन् ।‘महानायक’को मापदण्ड यही हो, यस्तो हुनुपर्छ भन्ने छैन । एक ब्यक्तिले लहडमा दिएको उपाधि हो राजेश हमाललाई ‘महानायक’ । मेरो बिचारमा एउटा महानायकले जीवनको अन्तसम्म पनि चलचित्र क्षेत्रमा केही न केही क्रियाकलाप गरेकै हुनुपर्छ । चाहे त्यो अभिनय, निर्माण होस् या अन्य।
राजेश हमाल एकसमयमा ‘सुपरस्टार’ हुन् । सुपरस्टार हिट फिल्म दिनेलाई भन्ने गरिन्छ । राजेशको यो योगदान देखिन्छ । राजेश अहिले फिल्म क्षेत्रमा क्रियाशील छैनन् । राजेशलाई ‘महानायक’ एक ब्यक्तिले एक कार्यक्रममार्फत दिएका हुन् । सबैले महानायक भन्नुपर्छ भन्ने जरुरी त छैन । पब्लिकले त्यो रुपमा लिएका छन् कि छैनन् भन्ने महत्वपुर्ण पक्ष हो।
राज्यस्तरबाट वा चलचित्र क्षेत्रको सर्वोच्च संस्था विकास बोर्डबाट यस्तो सम्मान दिइएको भए अकाट्य हुन्थ्यो । हामी लहडमा धेरै उपाधि दिने गर्दछौँ । पहिले पहिले राजा, राज्यबाट पदवी दिने चलन थियो । त्यो सबैलाई मान्य हुन्थ्यो । अहिले जो कोहीले पनि उपाधि दिने भएकोले त्यसलाई मान्यता दिने÷नदिने, आफुले त्यो उपाधिमा गर्व गर्ने÷नगर्ने, ब्यक्तिको बिचारमा भर पर्ने कुरो हो।